Madaxweyne Erdogan oo sifo xun ku tilmaamay hab dhaqanka Donald Trump - Caasimada Online
Home Dunida Madaxweyne Erdogan oo sifo xun ku tilmaamay hab dhaqanka Donald Trump
Madaxweyne Erdogan oo sifo xun ku tilmaamay hab dhaqanka Donald Trump
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa shaaca ka qaaday in dowladiisa aysan dhag jalaq usiin doonin wararka kasoo yeeraya dhigiisa Mareykanka Trump.
Recep Tayyip Erdogan, waxa uu sheegay in Trump uu u nugul yahay keliya sheegida dhibaatooyinka Islaamka, waxa uuna ku tilmaamay inuu yahay shaqsi aan u saaxiib aheyn caqli.
Recep Tayyip Erdogan, waxa uu cod dheer ku sheegay in dowladiisa aysan marnaba ka suuroobi doonin inay qiimeyso erayada kulul ee kaga imaanaya Trump, isagoo cadeeyay in Siyaasada dalkiisa ay tahay mid ka fac weyn riyada Trump.
Waxa uu Recep Tayyip Erdogan, carab dhabay in dowlada Turkiga ay u taagan tahay keliya difaaca Islaamka, waxa uuna ku goodiyay inay ka jawaabi doonaan waxa uu ugu yeeray caadifada Mareykanka.
‘’Kama aamusi doono mushkilaada uu Trump ka dhex abuuraayo dalalka Muslimka ah, waxaana diyaar u nahay inaan meel ku hubsano wararka aan miisaanka laheyn ee Trump’’ ayuu yiri Recep Tayyip Erdogan oo ay xiganayeen saxaafada gudaha.
Sidoo kale, Recep Tayyip Erdogan, ayaa wadamada Muslimka ah ugu baaqay in hankooda uu ka weynaado halka uu iminka taagan yahay oo uu sheegay inay aad uga hooseyso halkii laga filaayay, sida uu hadalka u dhigay.
Haddalka Recep Tayyip Erdogan, ayaa imaanaya xili uu dhawaan Trump shaaciyay in dowlada Turkiga ay tahay mid meyl adag oo ka dheereyneysa dowladaha asaageeda ah.